प्रधानमन्त्री ओली र कमल थापाबीच वालुवाटारमा वार्ता – Sandesh Press
प्रधानमन्त्री ओली र कमल थापाबीच वालुवाटारमा वार्ता
May 28, 2021 246
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाबीच वालुवाटारमा भेटवार्ता भएको बताइएको छ । राजनीतिक हिसावले भिन्न दृष्टिकोण राख्ने र धार्मीक विचारमा भिन्न बिचार रहेका दुई नेताबीच भएको गोप्य वार्तालाई वडो चासोका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न थापा शुक्रवार विहान वालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरुबीच गोप्य वार्ता भएको बताइएको छ ।
तर के विषयमा कुुराकानी भयो भन्ने कुरा भने खुलेको छैन । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघियताका समेत विरोधी रहेका कमल थापा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच अनौठो सम्बन्ध रहेको बताइएको छ । धर्मलाई अ फि म मान्ने पार्टीका अध्यक्ष रहेका ओलीको पछिल्लो घटनाक्रम भने धार्मीक बढी छन । पशुपतिमा सुनको गजुर, रामजानकी मुर्ती स्थाना देखि अन्य धार्मीक काम प्रति उनको रुचीले पनि कमल थापा उनी प्रति आकर्षीत भएका हुन सक्छन् ।
त्यस्तै निर्वाचनमा पनि फरक राजनीतिक विचारधारा राख्ने तत्कालिन नेकपासंग झापामा राप्रपाको सहकार्यले पनि त्यो कुरा पुष्टि गर्छ । त्यस्तै वागमती प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा पनि कमल थापाकै बलमा राप्रपाले एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई भोट दिने निर्णय गरेको बताइएको छ । शुक्रवार दुई नेताबीचको गोप्य वार्तालाई उनीहरुबीचको राजनीतिक रणनीतिका रुपमा बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली कि जसपालाई जस्तै राप्रपा पनि विभाजन गर्न चाहन्छन् वा आगामी निर्वाचनमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आकर्षण आफु प्रति बढाएर भोट लिन चाहन्छन् । यहि स्वार्थका कारण दुई नेताको भेट भएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाबीच वालुवाटारमा भेटवार्ता भएको बताइएको छ । राजनीतिक हिसावले भिन्न दृष्टिकोण राख्ने र धार्मीक विचारमा भिन्न बिचार रहेका दुई नेताबीच भएको गोप्य वार्तालाई वडो चासोका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न थापा शुक्रवार विहान वालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरुबीच गोप्य वार्ता भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली कि जसपालाई जस्तै राप्रपा पनि विभाजन गर्न चाहन्छन् वा आगामी निर्वाचनमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आकर्षण आफु प्रति बढाएर भोट लिन चाहन्छन् । यहि स्वार्थका कारण दुई नेताको भेट भएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।
Prevबिहीबार राती भेरी अस्पतालमा के भएको थियो ? हामफालेर ज्यान जोगाएकी नर्सको बयान
Nextआज राति भ्वाईस अफ नेपाल आउँछ कि आउँदैन ?
एकैदिन शनिवार २४ घण्टामा संक्रमित हुने भन्दा निको हुने दोब्बर
काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयहरु खुला
छोरी लिएर फ रार भएका श्रीमानले भेटे श्रीमतीसंग, यस्तो छ उनले छोरी लिएर हि ड्नुको कारण (भिडियो हेर्नुस्)
अन्तत प्रियंकाले दिइन् छोरीलाई जन्म? (10181)
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (5852)
भर्खरै सम्पूर्ण काठमाडौंबासीका लागि आयो अत्यन्तै खुसीको खबर। (5758)